Ungayilungisa kanjani ikhodi yephutha le-Disney Plus 83? - Ungakwenza Kanjani
Ungayilungisa kanjani ikhodi yephutha le-Disney Plus 83?
Ikhodi yephutha i-83 yiyona etholakale kakhulu phakathi kolwandle lwamaphutha iDisney + ephonsa kubasebenzisi.Akuchazeki neze ngenkinga eyibangelayo futhi ukwengeza kulokho awukwazi ukufinyelela kuhlelo lokusebenza nakancane lapho leli phutha livela, likumisa lapho ufaka iDisney +.
Yini Ebangela ikhodi yephutha le-Disney Plus 83 ekhombisa:
Uma sibuza ideski losizo leDisney + ngalolu daba, banokuqonda okuqonde ngqo phambili phendula kuso.Konke abakushilo ukuthi ngokuyisisekelo kungu-inkinga yokuhambisana kwedivayisi, iphutha lokuxhumeka, noma inkinga ye-akhawunti uqobo. Okudala ukuthi leli phutha livele akushiwo.
Izindlela ezihamba phambili zokuLungisa ikhodi yephutha le-Disney Plus 83:
Uma ubheka ifayili le- Ikhasi ledeski losizo leDisney + ngaleli phutha sibhale ezinye izindlela ezisheshayo nezilula zokulungisa ikhodi yephutha kube kuhle. Landela imiyalo enikezwe kahle futhi ngesikhathi esithile ungagxumela olwandle lokuqukethwe kwedijithali kweDisney +.
Indlela 1: Ukuhlola isimo seseva seDisney +
Izikhathi eziningi, okwenzekayo ukuthi akukho nkinga kusuka ekugcineni komsebenzisi, kungenzeka ukuthi iServer of Disney + uqobo lwayo iphansi, uma kunjalo ukuzama enye indlela yokuxazulula inkinga kuzoba yize.Ukuhlola isimo se-server sabo ungachofoza lapha futhi izokukhombisa isimo bukhoma.
QAPHELA:Qiniseka ukuthi ukhetha izwe lakho ngakwesokudla sefasitela.
Ingabe iNetflix iphansi manje? Hlola Isimo
Indlela yesi-2: Ukuhlola ukuxhumeka kwe-inthanethi
Lapho sesiwudlulisile udaba lweseva, sikhululekile ukuqhubeka nezinyathelo ezilandelayo. Okulandelayo kubheka ukuxhumeka kwe-inthanethi kwedivayisi ozama ukufinyelela ku-disney +.Amanye amadivayisi anesici esakhelwe ngaphakathi ukuhlola ijubane le-inthanethi. Uma ngabe idivayisi yakho ingenaso isici esinjalo, ungavakashela isivinini test by ookla ngesiphequluli sakho se-inthanethi noma ungalanda futhiSpeedtestuhlelo lokusebenza kusuka esitolo sohlelo lokusebenza ledivayisi yakho.
Indlela 3: Ukuhlola ukuhambisana kwedivayisi
IDisney + itholakala kumadivayisi amaningi kepha HHAYI BONKE. udinga ukuqinisekisa ukuthi idivayisi oyisebenzisayo iyakwazi ukusebenzisa i-Disney +. Ukuyihlola, ungachofoza lapha .
Indlela 4: Ukuhlola ukuhambisana kwesiphequluli
Uma usuqinisekisile ukuthi idivayisi esetshenziswayo iyahambisana futhi nokuxhumeka kwe-inthanethi kuhle. Udinga ukuqinisekisa ukuthi isiphequluli osisebenzisayo siyahambisana naso. Ukuyihlola, mane uchofoze lapha .
Indlela yesi-5: Ukuqalisa kabusha idivayisi
Njengoba idivayisi isebenza isikhathi eside, ingadala amafayela wesikhashana angavimbela iDisney + ukuthi isebenze ngokujwayelekile. Indlela yokuqalisa kabusha ayiqinisekisi ukuxazulula inkinga kepha ilula kakhulu futhi iyashesha, kufanelekile ukuzama.
Indlela 6: Ukuvuselela uhlelo lweDisney +
Uma uhlelo lwakho lokusebenza olisebenzisayo luphelelwe yisikhathi, kungahle kuvele ikhodi yephutha engu-83. Zama ukubuyekeza uhlelo lokusebenza bese uqalise kabusha uhlelo lokusebenza.
Indlela 7: Ukufaka kabusha isicelo seDisney +
Noma ngabe uhlelo lokusebenza lusesikhathini futhi uthola ikhodi yephutha engu-83, kungenzeka ukuthi kungenzeka kube nohlobo oluthile lwefayela elonakele lohlelo lokusebenza kudivayisi yakho. Ukulungisa le nkinga, susa yonke idatha ephathelene nohlelo bese uyikhipha. Landa uhlelo lokusebenza futhi bese ulusebenzisa ngokushesha.
Indlela 8: Buyekeza uhlelo Lokusebenza lwedivayisi
Njengoba nje uhlelo lokusebenza ludinga ukubuyekezwa, isistimu yokusebenza esebenza kuyo kufanele igcinwe isesikhathini. I-OS ephelelwe yisikhathi nayo ingadala ukuthi ikhodi yephutha 83 ivele. Bheka izibuyekezo ezingaba khona ze-OS yakho bese uyibuyekeza.
Indlela 9: Zama ukusebenzisa i-akhawunti ehlukile ye-Disney +
Uma zonke izinyathelo ezibalulwe ngenhla zingasebenzi futhi inkinga isaqhubeka, Zama ukungena ngemvume nge-akhawunti ehlukile ye-Disney + ngokuphelele. Siphakamisa lesi sinyathelo ngoba amathuba ukuthi i-akhawunti oyisebenzisayo ingaba nohlobo oluthile lokukhishwa kuyo. Yebo, kungenzeka.
1Q. Ungazi kanjani ukuthi ngabe idivayisi yami iyahambisana neDisney Plus?
Iminyaka:Ungachofoza lapha ukuthola uhlu oluphelele lwamadivayisi ahambisanayo.
2Q. Kuthiwani uma zonke lezi zinyathelo ezishiwo zingasebenzi ngekhodi lephutha leDisney Plus?
Iminyaka:Ungavakashela isikhungo sosizo esisemthethweni ukuze uxhumane nabo ngqo lapha .
Njengoba kuyiphutha elivame kakhulu ukwenzeka ngenkathi ufinyelela i-Disney +, ikhodi yephutha 83 inezinyathelo ezilula zokuxazulula inkinga. Isikhathi esiningi baxazulula le nkinga, kuyisimo esingajwayelekile kakhulu ukuthi i-akhawunti kufanele ithathelwe indawo.Ngiyethemba sikusizile ukuxazulula inkinga yakho. Zizwe ukhululekile ukwabelana ngemicabango yakho esigabeni sokuphawula ngezansi.